Nhau - Chii Chikonzero cheInjini Valve Inorira?
Chii chinonzi Chikonzero cheinjini Valve Inorira?
Chii chinonzi ruzha rwevhavha?
Mushure mekunge mota yatanga, injini inoita mutinhimira "watinya" wakafanana neruzha rwekugogodza kwesimbi, iyo inomhanyisa zvine mutsindo sezvo injini inomhanya. Mumamiriro ezvinhu akajairika, injini haizoite ruzha urwu kwenguva yakareba. Mazhinji eruzha anoitwa kwenguva pfupi mushure mekutanga kutonhora uye onyangarika zvishoma nezvishoma. Iyi ndiyo ruzha rwevhavhavha.
Chii chinokonzeresa kurira kwevhavha?
Chikonzero chikuru chekurira kwevhavhavha ndiyo mvumo yakagadziriswa pakati peiyo injini vharafu mashandiro, mazhinji acho ari kukonzerwa nezvikamu zvinopfeka kana kutadza kugadzirisa kugadzirisa, senge camshafts, rocker maoko, uye hydraulic jacks.
Mazhinji enjini izvozvi anoshandisa hydraulic jacks, ayo anonyanya kushandiswa kugadzirisa otomatiki mukaha unokonzerwa nekusakara kweiyo vharuvhu mashini. Iyo otomatiki kugadziridzwa kweiyo hydraulic jacks kunoonekwa neiye mafuta kumanikidza. Kana izvo zvikamu zvanyanyisa kupfeka uye zvakapfuura muganho wekugadzirisa otomatiki, vharuvhu ruzha ruchaitika. Iko kutadza kweiyo hydraulic jack ikholamu uye kutadza kwe otomatiki kugadzirisa basa kunogona kukonzerawo kuti vharuvhu iridze.
Kuwedzeredza kubviswa kwevhavhavha, kuwedzera kune ruzha kana uchitanga (zvinonyanya kuoneka kana mota ichitonhora), kune zvimwe zvinokanganisa. Zvakadai se: kukwana kwevhavha kusimudza, kukwana kukwana, kupera kusakwana, kudzikisa simba reinjini, uye yakakwira peturu yekushandisa.
Sezvo mhando yemotokari yega yega yakasiyana, izvo zvinodiwa pakubvisa vharuvhu zvakasiyanawo. Kazhinji, iyo yakajairwa clearance yeinotora vharuvhu iri pakati pe15-20 tambo, uye yakajairika clearance yevhavha yekupedza iri pakati pe25-35 tambo
Chii chiri hukama pakati pevharuvhu ruzha neinjini mafuta?
Sezvo otomatiki clearance yekugadzirisa mashandiro eiyo hydraulic jack inoonekwa nekumanikidza kwemafuta, iyo vharuvhu kurira kune hukama hwakananga nemafuta. Ehe, fungidziro ndeyekuti injini haina kusakara.
1. Kudzvinyirira kwemafuta mashoma kana kusakwana kwemafuta huwandu
Kumanikidzwa kwemafuta mashoma, kunyorova kwakaringana kwekamuri yevhavha. kana mafuta asina kukwana, uye maburi mu hydraulic jack kana mweya uchipinda munzira yemafuta, zvinokonzeresa ruzha rwevhavha.
2. Mhepo inopinda mumugwagwa wemafuta panguva yekuchengetedza
Vanhu vazhinji vane rudzi urwu rwechiitiko. Ivo vachangopedza kugadzirisa, uye pakanga paine pfupi-yenguva vharuvhu kurira kana iko kuvesa kwaive mangwana acho. Muchokwadi, mamiriro aya akajairika, nekuti mukuita kwekudonhedza mafuta mupaseji yemafuta, mafuta ari mundima yemafuta anodururwa, uye mweya unokwanisa kupinda munzira yemafuta uye unokonzera ruzha rwevhavha. Mushure menguva yekushanda, mweya uchaburitswa uye ruzha rwevhavha rinonyangarika.
3. Kuwedzera kabhoni kuisa muinjini
Mushure mekunge injini yashandiswa kwenguva yakati, macarbon deposits anozoitika mukati. Kana kabhoni yakaisa ikaunganidzwa kune imwe nhanho, nzira dzemafuta dzinogona kuvharwa, zvichikonzera otomatiki gadziriro yekugadzirisa basa reiyo hydraulic jack kutadza uye zvichikonzera ruzha rwevhavha.
Nzira yekudzivirira sei ruzha rwevhavha?
Kudzivirira kurira kwevhavha kuri nyore kwazvo. Muridzi wemota anongoda kuchengetedza nenguva zvichienderana nezvinodiwa nemugadziri kudzivirira kupfeka kweinjini, izvo zvinogona kudzikisira kuitika kwechiitiko ichi. Izvo zvakare zvakakosha kuti usarudze injini yemafuta iyo inokodzera iyo giredhi reinjini uye viscosity yemota yako, uye usateedzere zvakapofumadza kumusoro-kumagumo uye kwakaderera-viscosity injini yemafuta.